Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » More ụgbọ elu Pegasus UK na Turkey ugbu a ka Turkey na -emepe
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Turkey na -agbasa News • Akụkọ UK na -agbasa
Pegasus eweghachila ọdụ ụgbọ elu Istanbul Sabiha Gökçen n'ọdụ ụgbọ elu site na London Stansted, na-eji ụgbọ elu ụbọchị abụọ na-apụ na 14:40 na 00:05 site na ọdụ ụgbọ elu London Stansted, wee si n'ọdụ ụgbọ elu Istanbul Sabiha Gökçen lọta na 11:35 na 21:00.
Ka Turkey na -emepe, Pegasus ụgbọ elu na -enye ụgbọ elu ndị ọzọ site na London Stansted na Manchester.
Pegasus na -efega ebe anwụ na -acha gụnyere Antalya, Bodrum, Dalaman, Izmir, Istanbul na ndị ọzọ na Turkey na karịa.
N'iburu n'uche ọkwa ọhụrụ na -etinye Turkey na ndepụta amber, Pegasus na -ahụ uto siri ike na ntinye akwụkwọ ya na Turkey site na England.
Ka oge ọkọchị na-atụgharị ruo mgbụsị akwụkwọ, fepụ maka anwụ anwụ ọla edo, osimiri aja na nlegharị anya na-enweghị igwe mmadụ. Site na ọkwa ọkwa na Turkey batara na ndepụta amber nke England na 22 Septemba 2021, onye ndu ụgbọ ala dị ọnụ ala, Pegasus ụgbọ elu, agbasawanyela usoro ya na ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu ya na London Stansted na Manchester na Turkey na gafee.
Pegasus eweghachila ụgbọ elu na -aga na ọdụ ụgbọ elu Istanbul Sabiha Gökçen site na London Stansted, ụgbọ elu ugboro abụọ kwa ụbọchị na-apụ na 14:40 na 00:05 site na ọdụ ụgbọ elu London Stansted, wee si n'ọdụ ụgbọ elu Istanbul Sabiha Gökçen lọta na 11:35 na 21:00. A na-ere ụgbọ elu ugbu a site na £ 49.99 n'otu ụzọ. Ụgbọ elu ụgbọ elu ugboro ise kwa izu na-arụkwa ọrụ ugbu a site na ọdụ ụgbọ elu Manchester ruo ọdụ ụgbọ elu Sabiha Gökçen nke Istanbul, na-apụ na 12:50, na ụgbọ elu ịlaghachi na-apụ na ọdụ ụgbọ elu Istanbul Sabiha Gökçen na 09:45 (oge mpaghara na-emetụta). Ọnụ ego otu ụzọ si Manchester na-ere ugbu a site na £ 74.99. Ụzọ abụọ a na -enye njikọ dị mma na -aga n'ihu na netwọkụ Pegasus nke ebe 36 na Turkey, gụnyere ebe a na -ewu ewu n'ụsọ oké osimiri na -eme omenala na izu ike, dịka Bodrum, Dalaman na Antalya - yana ebe ndị ọzọ 83 nke mba ụwa.
Pegasus Airlines'usoro gbasaa gụnyere ụgbọ elu ụgbọ elu ugboro ise kwa izu site na 21 Ọktọba n'etiti London Stansted na Izmir, n'ụsọ oké osimiri Aegean nke Turkey, ụgbọ elu na-apụ na 12:55 site na London Stansted, na ịlaghachi ụgbọ elu na-apụ n'ọdụ ụgbọ elu Izmir Adnan Menderes na 10:05 (oge mpaghara. tinye). A na -ere ụgbọ elu na -aga Izmir ozugbo site na £ 59.99. Pegasus ga -ebido ụgbọ elu na -aga kpọmkwem n'etiti London Stansted na Antalya maka oge oyi na 20 Ọktoba.
Pegasus Airlines CCO, Güliz Özturk kwuru, sị: “N'iburu ọkwa ọhụrụ na -eweghachi Turkey n'ime ndepụta amber, anyị na -ahụ uto siri ike na ntinye akwụkwọ anyị na Turkey site na England, na nzaghachi maka ọchịchọ na ọchịchọ na -arịwanye elu na ọchịchọ maka njem mgbụsị akwụkwọ, anyị ' ọ masịrị m na anyị na -agbasawanye usoro ụgbọ elu anyị site na London Stansted na Manchester ruo Turkey, yana njikọ dị mma na netwọkụ anyị nke ebe 119 na mba 44 - nke pụtara na ndị njem ga -enwe ọtụtụ nhọrọ karịa na nhọrọ ntinye akwụkwọ anyị na -agbanwe agbanwe n'oge mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri. Anyị na -eme atụmatụ ịbawanye ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu anyị si England ma emechaa n'oge mgbụsị akwụkwọ ma ọ bụrụ na ọchịchọ na -arịwanye elu, anyị na -atụkwa anya ịnabata ndị ọbịa anyị n'ụgbọ ka njem malitere ịmalite ọzọ. "
Nakwa netwọkụ sara mbara na Turkey, Pegasus ụgbọ elu na-efega ebe 119 na mba 44, gụnyere ebe dịka Dubai, Tel Aviv na Sharm el-Sheikh, na-enye ma ụgbọ elu dị ọnụ ala ọnụ yana njikọ enweghị njikọ na otu n'ime ọdụ ụgbọ mmiri kacha nta na Europe. .
Ihe kacha mkpa Pegasus bụ ahụike na nchekwa, yana usoro nchekwa Covid-19 zuru oke gụnyere masks achọrọ n'ụgbọ. Pegasus bụkwa otu n'ime ụgbọ elu ụgbọ ala dị ọnụ ala mbụ na-anwale ngwa njem Passport metụtara ahụike ahụike IATA na ụgbọ elu ahụ na-enye Express Kiosks na ịbanye na kọntaktị na mbupu akpa na Turkey.